कतिवटा रिव्निया रूबलमा छन्? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कतिवटा रिव्निया रूबलमा छन्?
रुसी संघको केन्द्रीय बैंकको विनिमय दरमा, रिव्नियालाई रूबल विनिमय दर वर्षको 4.12.2012 को लागी 1 UAH = 3.77 RUB हो। तपाईंलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि दर निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ र रिव्नियालाई रूबल वा रूबलमा रिव्नियामा परिवर्तन गर्नुहोस् यस दरमा तपाईं सफल हुन सक्नुहुन्न। प्रत्येक एक्सचेन्जरले आफ्नै विनिमय दर सेट गर्दछ।
आज, रूसको 05.04.2015 केन्द्रीय बैंकले 24,2536 यूक्रेनी रिव्नियाको लागि रूसी रूबलको 10 दर सेट गरेको छ।
त्यो हो, एक रिव्नियाको मोटामोटी 2,5 रूबल भन्दा थोरै कम खर्च हुन्छ।
म हालको जानकारी यहाँ प्राप्त।
म सधैं विश्वास गर्दछु कि रूबलले सेन्ट समावेश गर्दछ ...
र हामी बाँदरबाट आएका ...
इन्टरनेटको मतलब यही हो - तपाई सबै कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ)
युनिट विनिमय दर स्थिर नभएकोले, म युक्रेनी बैंकहरूमा मुद्रा विनिमय तालिका प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छु।
रसियाका बैंकहरूमा विनिमय दरहरूको लागि, वेबसाइटमा जानकारी प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ तपाईं बैंकहरूको विनिमय दरहरू र उनीहरूका विवरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
औसतन आज रूसीमा 30.01.2013 NBU दरमा 0,265 रिव्नियास
ठिक छ, प्यारा यात्रुहरू र कालो सागरका प्रेमीहरूले बुझ्नेछन् कि यो मुद्रा एकदम स्थिर छैन, किनभने जब मौसम त्यहाँ शुरू हुन्छ, यो बढ्न थाल्छ। सामान्यतया, 1 hryvnia = 3,77 रूबल क्रमश: 1-hryvnia 0,27 रूबलमा। सामान्यतया, यदि तपाइँ सस्तो मुद्रा किन्न चाहानुहुन्छ भने निश्चित रूपमा त्यहाँ बैंकको मुद्रा ब्यूरो हुन्छ, त्यसैले तिनीहरू सस्ता लिन सक्दछन्, मुख्य कुरा केहि नक्कली छैन भनेर निश्चित गर्नु हो।
कति रिव्निया रूबल गर्न
वास्तवमा, अर्को मुद्रा बिरूद्ध एक मुद्राको विनिमय दर लगातार परिवर्तन हुँदैछ। रूबल बिरूद्ध रिव्निया विनिमय दर अपवाद छैन। हालको पाठ्यक्रम पत्ता लगाउने एक धेरै सजिलो तरीका गुगल प्रयोग गर्नु हो। यो गर्नका लागि गुगलमा टाइप गर्नुहोस्।
1 RUB UAH मा
गुगलले मलाई जवाफ दियो: 1 रूसी रूबल = 0.267507993 यूक्रेनी रिव्निया।
रूबलको बिरूद्ध रिव्निया विनिमय दर लगातार परिवर्तन हुँदैछ, वास्तवमा यो बजारमा भएको कुनै पनि अन्य मुद्रासँगै हुन्छ। आजको दिनसम्म, 1 रूसी रूबल 0,2522 रिव्निया। त्यो हो, 3,9654 रिव्निया किन्नका लागि तपाईलाई 1 रूबल चाहिन्छ। जे भए पनि, कुनै पनि समयमा रिव्निया विनिमय दरको हालको रूबल पत्ता लगाउन, केवल मेल.रु खोज प्रणालीमा निम्न क्वेरी लेख्नुहोस्: उद्धरण; कतिवटा रिव्निया रूबलक्युटमा छन्; र खोज परिणामहरू अघि तपाईंले केन्द्रीय बैंकको सहि दर देख्नुहुनेछ।
आज जनवरी2को 2013 सबै 0,266 रिव्नियाको एक रूबलमा वर्षको XNUMX हो। तर यो संख्या लगभग हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले सहि रकम पत्ता लगाउनको लागि, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि याान्डेक्समा दुई-शब्द पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस्: रूबल रिव्निया। र तपाईं तुरून्त मुद्रा रूपान्तरण देख्नुहुनेछ।
कतिवटा रिव्निया रूबलमा छन्? ... यो विचार गर्न लायक छ कि रूबल बिरूद्ध रिव्निया विनिमय दर आवधिक रूपमा परिवर्तन हुन्छ, जुन परिणामस्वरूप हामीलाई प्रति १ रूसी रूबल कति रिएभनिया बताउँदैन। हामी केवल यो भन्न सक्छौं 1 रूबलमा 1 /3रिव्नियाको भाग.
1 रूसी रूबल 0.26528 hryvnias बराबर छ
1 /4रिव्निया को रूबल असभ्य छ।
एउटा रिव्निया4रूबल हो। अवश्य पनि यो कुनै मोटा अनुमान हो, तर कुनै न कुनै अनुमानका लागि सही।
त्यस्ता गणना युक्रेनियनहरुलाई रूबलमा मूल्यहरु बुझाउन सुविधाजनक छ। अब यस्तो देखिन्छ कि इन्टरनेटमा 8 बाट युक्रेनबाट 10।
जुलाईको मध्यमा याल्ता र काला समुद्रको किनारमा जुलाई 2011 दर थियो: एक्सचेन्जरमा 1000 रूसी रूबलले 280 रिव्नियास दिए (औसतमा)। यसैले, 1 RUR मा यो 0,28 UAH थियो, र 1 UAH 3,57 RUB मा।
यदि रिव्नियालाई आरयूबीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्‍यो भने, औसत दर २285 युएएच थियो। १००० रग को लागी अर्थात् तपाईले UAH २1000 the हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ एक्सचेन्जरलाई - तपाईले १००० RUB पाउनुहुन्छ। T.O. १ UAH बाट तपाईले 285१ रूबल पाउनुहुनेछ, वा १ RUB ०.२1000 UAH को खरीदमा खर्च गर्नुहोस्।
धेरै आगन्तुकहरूले एक्सचेन्जर्समा विनिमय दर सेट गर्न गाह्रो मान्दछन्, किनकि बोर्डमा कोरिएको र्याभ्नियाहरूको संख्या कति जारी हुन्छ / प्राप्त हुन्छ भनेर संकेत गरिएको छैन।
युक्रेनमा रिव्निया लिन र रसियामा भाँडा लिन यो अधिक लाभदायक हुन्छ।
बिभिन्न बैंकहरुमा बिभिन्न तरिकाहरूमा:
पाठ्यक्रम यस्तो देखिन्छ - एक रिव्नियाका लागि उनीहरूले २.२। रूबल दिन्छन्।
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,318 प्रश्नहरू।